トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Thola izitolo oncomekayo wamakhaza pachinko imicimbi
Hlobo luni pachinko esitolo noma ukuncoma ukwenza umcimbi, sizobheka ukuthi Pick-ke lapho kunqunywa.
■ ngenyanga eyodwa isenzakalo uphawu
Okokuqala, kuyinto emakhazeni pachinko, okuyinto ubenomkhankaso uphawu kanye ngenyanga. Ngo-pachinko emakhazeni ukuya kini, zama ukuqinisekisa ukuthi lezi enikhuluma umcimbi uphawu.
ngoba usuku okwakungakaze kuqhutshelwe umcimbi uphawu, Dattari Vula Usuku ezitolo, ngoba usuku ngokuvamile nencazelo ekhethekile, efakwa okuthile sizathu, kungaba ukuthi uzama Khonza wenkokhelo we Kukhona.
Ngezinye izikhathi, usuku kokuphela ngosuku olufanayo, kodwa kukhona emakhazeni pachinko ezithi yonke imicimbi billboard, ezifana pachinko esitolo, ibhola out, ngoba kulula futhi abahlakazekile ngosuku, endaweni ethile e-yokutakula kosuku kuyinto kukhona kungenzeka ukuthi inikezwe.
Nokho, uma inyanga nokubalulekile, ngoba Khonza bagxile, wukuthi igalelo ibhola ngaphandle wamakhaza pachinko, ezifana obeka esikhulu ngaphambili.
Nokho, namanje kubhekiselwa kuye ngokuthi umcimbi uphawu, ngoba inkulu pachinko emakhazeni eyehlayo kutholakale inzuzo, usadinga qinisekisa lonke umuzwa wenkokhelo ngamehlo ami siqu. Noma, Ingabe uqinisekile ukuthi ufuna ukusebenzisa amasevisi ezifana idatha Robo indawo Seven.
■ isikhathi umehluko phakathi umcimbi evulekile
ngokuvamile kuba, kodwa lokho usushiywe kusukela ekuseni, ukuze 15 ezimpondweni wavuleka, 19 ezimpondweni evulekile, zikhona izenzakalo ukuze banciphise isikhathi ukusebenza. Uma isikhathi egijima awunato, kungase kubonakale sengathi ngeke ukululama, eqinisweni a nalokho okuphambene. Ngo wamakhaza pachinko, kodwa kungase ngezinye izikhathi nawo lwenziwa onobuhle ezithandwayo, base izobamba kahle sehlo imifanekiso ufuna ukwandisa ukusebenza. It ufuna ukwandisa
yemfundisoze, uyophinde abe yokuthi ufuna ukushiya isithombe esihle. Kanye esitolo imifanekiso ethandwa, lesi sehlakalo ngokuvamile kwenziwa onobuhle ezifana ufuna ukusebenzisa eside.
ngokuvamile, ngisho uhlobo okunzima imodeli nail ukulungiswa okungahambisani kangaka isethi, lapho umehluko isikhathi phakathi izenzakalo evulekile, sivamile zingcono kunokujwayelekile. Ngenxa yaleso sizathu, pachinko esitolo okuyinto futhi kwenziwe izikhathi eziningana ngenyanga umehluko isikhathi phakathi umcimbi evulekile, ke izobizwa ukuncoma.
Nokho, uma lokhu ngokucacile noma onobuhle engathandwa, ngakho ukunika kukhona iqiniso lokuthi "noma Wena obophulile kuphela kancane phambi ukususwa ...", ukuthi lana, Ya Isitolo inqubomgomo ibhizinisi kusukela evamile ngeke kunesidingo ukuphenya ngoba nokwethenjelwa.
ukuhlanekezela, ezifana grounder kuhlangene, umcimbi ezifana ukuthi umdlalo grounder igama imodeli kanye nosuku, zama uqaphele ukuthi ayanda amathuba Gase izenzakalo ukuheha amakhasimende injongo.
lawa mkhuba indaba kuphela, ke asisebenzi zonke. Kusukela esitolo ukukhetha kuzothinta kakhulu pachinko of ukunqoba noma ukuhlulwa, kudingeka sihlole ukuthi izici Amathrendi we-hangout ka sasemakhazeni pachinko kusukela evamile futhi enzima. Nokho, uma ubeka lolu hlobo ithephu ekhanda, kuba indaba ..., Lokho kubonakala izinto zazingabonakali kuze kube manje. Imicimbi njengalezo, zama uqaphele ukuthi ayanda amathuba Gase izenzakalo ukuheha amakhasimende injongo.
lawa mkhuba indaba kuphela, ke asisebenzi zonke. Kusukela esitolo ukukhetha kuzothinta kakhulu pachinko of ukunqoba noma ukuhlulwa, kudingeka sihlole ukuthi izici Amathrendi we-hangout ka sasemakhazeni pachinko kusukela evamile futhi enzima. Nokho, uma ubeka lolu hlobo ithephu ekhanda, kuba indaba ..., Lokho kubonakala izinto zazingabonakali kuze kube manje.